Playa La Herradura, Las Tunas, Cuba
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguOdalis
Indlu yeParadesi yindawo yangasese yokuphumla phantsi kwelanga kunye nomthunzi. Iimitha ezingama-50 kuphela ukusuka elunxwemeni oluzolileyo olulungele iintsuku ezimbalwa zokuphumla ngexesha lohambo lwakho lwaseCuba...
Silusapho oluncinci olusanda kuvula iNdlu yeParadesi ngo-2019.
..Sinikezela ngesidlo sakusasa esimnandi nesimnandi, isidlo sasemini, kunye nesidlo sangokuhlwa $. iziselo & namanzi inkonzo ye-WiFi ye-WiFi, i-snorkeling, iHashe kunye nokukhwela i-boggy $, ukukhwela ihashe $, ikofu kunye nenkonzo yeti. $ Sijonge ukwenza ukuhlala kwakho okukhethekileyo kwaye kungalibaleki.
Ukwazi into oyidingayo ukuze uhlale ngokonwaba siye saqinisekisa ukuba sikunika yonke into oyifunayo kwaye ngakumbi eyona nto ibalulekileyo. Umatrasi otofo-tofo, indawo yokupholisa umoya entsha, iFridge enkulu, ishawari eqhagamshelwe kwibhoyila enamandla yamanzi ashushu, umabonakude, inkonzo yeWiFi, iyadi entle yesidlo sakusasa, enendawo yokupaka ekhuselekileyo yemoto yakho, nokunye okuninzi.
1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
IHerradura yidolophu elunxwemeni ekhululekileyo eyindlela ebethwayo yokhenketho. Yiba namava eCuba yokwenyani, ukutya kwaselwandle okutsha, kunye neelwandle ezintle ezingenanto
Umbuki zindwendwe ngu- Odalis
Sihlala kanye kwindlu elandelayo kwaye siya kuhlala sikhona kwimibuzo kunye nezicelo ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki.